HomeWararka DenmarkDenmark: Joojinta Qaxootiga la Musaafurinayo oo ka Socda Dalkaasi
October 19, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
In ka badan 53,000 oo muwaadiniin Danish ah ayaa ku baaqay in wax laga beddelo sharciga socdaalka ee waddanka si looga hortago masaafurinta magangalyo -doonka Suuriya ee dalkooda.
Deenishka ayaa lagu casuumay inay saxeexaan codsi ay ku dalbanayaan tan iyo bishii Abriil ee la soo dhaafay, maadaama tirada saxeexyadu hadda kor u dhaaftay 50,000, waa in baarlamaanku arrinta ka doodaa, sida uu dhigayo sharciyada deenishku.
Sharciga deenishku wuxuu siinayaa suurtogalnimada dib -u -qiimeynta baahida magangalyo -doonka ee ilaalinta.
bishii Diseembar 2019 Laanta Socdaalka ee Denmark ayaa soo gabagabeysay in xaaladaha ka jira gobolka Suuriya ee Dimishiq aysan mar dambe halis u ahayn magangalyo -doonka Dimishiq si ay u helaan deggenaansho ama u kordhiyaan oggolaanshaha deggenaanshaha ku meel gaarka ah. .
Si kastaba ha ahaatee, dowladda Denmark ayaa isla go’aamisay inaan lagu qasbin qof qaxooti ah oo ka yimid Suuriya inuu ku laabto. Sababtoo ah ma rabto inay iskaashi la yeelato taliska Suuriya, halka laga rabo inay masaafuriso magangalyo -doonka in wadashaqeyn lala yeesho waddanka hooyo.